Gumaata Kaampaasii 4: Kalaqa maashina shaayiirraa hanga 'Wi-Power' - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright Fuula Feesbuukii Yunvarsiitii Gondar
Barataa Hamzaa Hamiid ganamaan waan kennaa isaa adda baafate fakkaata. Barataan kun milkaa'ina hojii kalaqaatiin Yunvarsiitiin Gondar maqaa gaarii akka godhatus taasiseera.
Guyyaan Saayinsii Addunyaa akka Itoophiyaatti marsaa 3ffaa ALA Onkoloolessa 27 hanga Sadaasa 01, 2011tti Ministeera Saayinsiifi Tekinooloojiitti wayita kabajametti, Wiirtuun Saayinsii fi Tekinooloojii Yunivarsiitii Gondar hojii barataa Hamzaa Hamiid qabatee dhiyaachuun akka biyyaatti tokkoffaa ta'uun dorgommicha mo'ateera.
Hamzaan hojiiwwan kalaqaa hedduu hojjechaa jiru keessaa kan dorgommii kana irratti dhiyeessee ittiin mo'ates ibsaa shiboo malee (Wi-Power) dhiyeessuudhaan ture.
Yunvarsiitti warra gargaarsa addaa barbaadaniif eenyutu jira?
Barataa Hamzaa Hamiid seenaa isaa akka armaan gadiitti nuuf qoodeera.
Umuriin koo waggaa 18. Mana barumsaa sadarkaa tokkoffaafi lammaffaa Gondar, naannoo Janaamooraattin baradhe. Yeroon Jaanaamooraa jirutti hojiiwwan kalaqaa hedduu hojjedhee, yeroo hedduus ittiin dorgomeera.
Barana ammoo Yunvarsiitii Gondar keessatti Elektirikaalii fi Injiinaringii Kompiitaraa waggaa tokkoffaan barachaa jira.
Akaakuu barnootaa keessaa Herreega, Fiiziksii fi IT baayyeen jaalladha.
Ergan Yunivarsiitii kana seenees hojii kalaqaa hedduminaan itti fufeen hojjechaa jira.
Yeroo ammaa kana pirojektoota kalaqaa 20 caalan hojjechaan jira.
Yeroon ijoollee ture waantota gara garaa akka meshaalee elektirooniksii hojjechuun jaaladha.
Kutaa sadaffaa yeroon baradhutti barattoonni sadarkaa tokkoffaa irraa hanga sadaffaa ba'an akka waan tokko kalaqanii dhufan gaafataman. Namni waan tokko kalaqe ni jajjabeeffama ture.
Ani yeroo sana baayyee mucaa xiqqoon ture. Garuu kalaqa tiraafika to'achuun hojjedhee geesse. Daarektarri mana barumsaa keenyaa baayyee na dinqisiifatee qalama tokko na badhaase.
Sana badhaafamuukoof yeroo sana gammachuun koo daangaa hin qabu ture.
Image copyright AMHARA MASS MEDIA AGENCY
Goodayyaa suuraa Mandara itti dhalate keessa simannaa Hamzaaf taasifame
Badhaasni sun caalaatti na kakaasee jennaan Waxabajjii keessa yeroo manni barumsaa cufamu meeshaa sagalee guddiftuu, xiyyaaraafi kalaqawwan biroo hedduun dhiyeessee agarsiise.
Karaa barumsaas, karaa kalaqaatiinis badhaafamuu danda'eera.
Kalaqawwan hojjedheefi dorgommii irratti hirmaanne irraa muuxannoo fudhachuudhaan kutaa shan gaafan ga'u maashina shayii kan elektiriikaan hojjedhe.
Magaalaa Jaanaamooraa keessa ibsaan sa'aatii 24 hin jiru.
Yeroon kutaa jaha ga'e ammoo Baahir Daarin deeme. Achi irratti ammoo maashina shaayii, meeshaa xaafii sararaan facaasu hojjedheen ittiin dorgome.
Yeroo sanarrattis badhaafamuu baadhus garuu dinqisiifannaa guddaatu ture.
Meeshaan ani akka xaafii sararaan facaasu kalaqe sun xaafii ni calleessas waan tureef baayyee guddaadha.
Jaanaamooraa irraa gara Baahir Daar geessuunuu baayyee akka na rakkise nan yaadadha.
Kalaqni yeroo baayyee rakkoolee jiran irratti ta'uu akka qabuufi furmaata hawaasaaf dhiyeessuu kan danda'u ta'uun baradhe.
Hamzaa Hamiid, Barataa
Hojii kalaqaa kanaan dorgomuu koo kanaan waan hedduun barachaa dhufe.
Kalaqni yeroo baayyee rakkoolee jiran irratti ta'uu akka qabuufi furmaata hawaasaaf dhiyeessuu ta'uu akka qabun baradhe.
Yeroo kalqnu xiyyeeffannaa kan irratti gochuu qabnu rakkoowwan jiran irratti ta'uu qaba.
Yeroo wantoota rakkoo hawwaasaa furan irratti kalaqa dhiyeessuu dandeenye kan nuti badhaafamuu dandeenyu kan jedhun hubadhe.
Kalaqa tiraafika to'achuu yeroon kutaa shan ture jalqabe ergan as dhufee hojjechuun eegale.
Jalqaba kalaqa mana barumsaa to'achuun hojjechuu jalqabeen ture. Kalaqa mana barumsaa to'achuu kanaan bara darbe ittiin dorgomee tokkoffaa ittiin ba'eera.
Kalaqni mana barumsaa to'achuu kun meeshaa rakkoo walxaxaa mana barumsaa furudha.
Waan isaa akka maashina ATM kan ta'edha, karra irra dhaabbata. Barattoonni kaardii mataa mataa isaanii qabaatu.
Barsiisonni daree maqaa waamaniin ammoo saanduuqa mataa mataa isaanii ni qabaatu.
Saanduuqa kanaan barattoota to'atu barsiisonni kun. Saanduuqichis tokkoo tokkoon isaa bilbila mataa isaa qaba.
Barattoonni kaardii sanaan yeroo galma irraan seenan barsiisaa daree isaanii biratti saanduuqa kan isaa keessatti galmeessaaf.
Saanduuqni sun saatiifi guyyaa barataan itti dareetti argame galmeessee yeroo barbaadametti maxxansanii baasuun ni danda'ama.
Fakkeenyaaf, saanduuqni sun yeroo barataan kaardii sana fayyadamutti mallattoo sirrii irratti taasisa.
Bifa kanaan kan torbanii maxxansee baasa maashinni sun.
Kan biraan ammoo kaardiin kun tarii barattoonni hatanii dhokatanii dallaadhaan hulluuquu danda'u, ykn ammoo kaardii nama biraa qabatanii seenuu danda'u.
Kun garuu gonkumaa miliquu hin danda'an sababiin isaas ashaaraadhaan kan hojjetame.
Qaamu kanaan ammoo barattoonni akkuma kaardii isaaniitiin karra seenaniin yeroo deemanii daree keessatti baratan yeroo seenan kan agarsiisus qaba.
Karaa biraatiin ammoo kanan mana barumsaatti kalaqe keessaa 'Audio-conference' kan ittiin gaggeessuun danda'amudha. Hanga ammaatti kan jiru viidiyoo konferaansiidha.
Kun garuu bakka ibsaan jirutti qofa kan hojjetu. Ani garuu mana barumsaa keenya ibsaan waan hin jirreef 'Audio-conference' mana barumsaa keenyaaf kalaqeera.
Daarekterri biiroo isaa keessa taa'ee barsiisota mooraa keessa, daree keessa ykn bakkuma jiranitti waliin konferaansii gaggeessuu ni danda'a.
Kalaqa 'Audio-conference' fi kan mana barumsaa ittiin to'atan kanan hojjedhe kutaa 8-10 yeroon barataa turedha.
Bilbilli akka 'Audio-conference' ittiin walqunnaman ani mana barumsaaf kalaqe kun qarshiis, yeroo netwoorkiis hin gaafatu, tolumaan ittiin walqunnamuun danda'ama.
Daarekterri mana barumsaa biiroo isaa keessa taa'ee barsiisotaafi namoota biroo barbaade waliin walga'ii gaggeessuu danda'a baasii tokko malee.
Kalaqa rakkoo ibsaa furuuf...
Pirojektiin kalaqaa koo inni biraan rakkoo ibsaa waliin walqabata. Ibsaan sababii bireekerii ykn qilleensaan, addaan cituudhaan, namaafi qaama gara garaatiin rakkoon irra ga'ee addaan cituu ni danda'a.
Yeroo hedduus bakka rakkoon itti qaqqabes adda baafachuun rakkisaadha.
Ani yeroo baayyee meeshaalee elektirooniksii suphuudhaan akkasumas yeroo ibsaan yaratus hojjechuudhaan qarshii waanan argadhuuf ofii koon of gargaarsisa malee namni addatti na duukaa ta'ee hanga ammaa na gargaare hin jiru.
Meeshaa kalaqaaf na barbaachisus namoonni mana suphaa elektirooniksii qaban na gargaaru, bitten isaas baayyee gatiin isaa xiqqaadha.
Pirojektootan jalqabe hunda nan milkeessa jedheen yaada sababiin isaas tokkoo tokkoon isaanii kaayyoo mataa isaanii ni qabu.
Piroojektoota irratti hojjechaa jiru
Tokkoffaan, to'annaa balaa konkolaataa, lammaffaan ammoo rakkoo hedduu ibsaa keessa jiru furuu kan jedhanidha.
Kalaqni rakkoo ibsaa furuuf ani hojjechaa jiru keessaa ibsaa osoo shuboo (wadaroo) hin diriirsiin bakka barbaadan geessisuudha.
Utubaan ibsaa kufuu/jiguu danda'a, wadaroon cituu danda'a, ykn gubachuu dand'a.
Kanaaf, ibsaa shuboo malee ibsaa bakka barbaadame geessisuu kanan yaadeef kanaaf.
Kalaqni kun kanaan dura sadarkaa yaaliitti ilaalameera. Ammas irra deebiidhaan hojjetamee ilaalameera.
Chaarjeroonni shuboo malee ni jiruu, wantoonni shuboo malee hojjechuun danda'amu jiru.
Fakkeenyaaf, ibsaan kan buufata Finfinnee kan hojjetu ta'ee kan buufata Baahir Daar garuu kan hin hojjenne yoo ta'e ibsaa shuboo malee dabarsuu kanaan buufata ibsaan jiru tokko irraa gara ibsaan hin jirreetti dabarsuun ni danda'ama.
Kalaqni kun akka hojjechuu danda'u Yunvarsiitii Gondaritti yaalamee akka hojjetu ilaalameera.
Hojii kanas, ogeessota agarsiisnee kan mirkanaa'eeru yommuu ta'u, amma ibsaa shuboo osoo hin diriirsiin bakka tokko gara bakka biraatti kiiloomeetira dheeraa geessuu akka dandeenyu hojjennee gara hojii omishuutti seenuudhaaf karoora qabna.
Hanga ammaatti kan hojjetame kiiloomeetira gabaabaa qofaadha.
Namoonni kalaqa kana arganiifi hubatan kiiloomeetirri isaa dheeratee osoo gara hojii sirriitti galamee gaariidha jedhu. Nutis amma gama kanaan qorachuu eegalleerra.
Barumsi amma ani amma barachaa jirus hojii kalaqa koo kana waliin walqabatu waan ta'eef kalaqaafi qorannoo cimsee itti fufuuf na gargaara.
Akka kootti barumsi rakkoo biyya keenyaa gama hundaan—dinagdee, hawwaasummaafi siyaasaatiin ta'uu qaban jedha.
Namni kaayyoo jireenya isaa beekuudhaan nuffuufi dadhabbii malee kennaa isaa adda baafatee yoo hojjete ni milkaa'a.
*Odeessi Gumaata Kaampaasii, jiruufi jireenya barattoota yunivarsiitii hirmaachisuun BBC Afaan Oromoo irraa torbaniin altokko kan isinii dhiyaatudha. Seenaa keessanis nuuf qoodaa.
Gumaata Kaampaasii 3
Gumaata Kaampaasii 2:
Gumaata Kaampaasii 1
Gumaata Kaampaasii 3: Yunvarsiitti warra gargaarsa addaa barbaadaniif eenyutu jira?
28 Sadaasa 2018
Gumaata Kaampaasii 2: Raajii Ashannaafi maaliif 'Theoretical Physicist' ta'uu fedhe?
21 Sadaasa 2018
Gumaata Kaampaasii 1: Dubartii waggaa 5 keessatti Pireezidantii ittaantuu Yunivarsiitii Madda Walaabuu taate
'Jijjiiramichi daandiirraa maqeera jedheen amana' Taammaany Bayyana
Wiirtuun aadaa Looreet Tsaggaayee G/Madihin eebbifame
Barruuleen Awustiraaliyaa maaliif fuula isaanii jalqabaa gurraachessan?
Daandiiwwan Maadrid hoolotaan guutaman
Deeggartoonni taphataa gurraacharratti sagalee qamalee dhageessisan
Masaanummaa dorgommii kubbaan olii- Baarseloonaafi Riyaal Maadiriid